ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါကုသပေးနေရင်း နိုင်ငံတကာဆရာဝန်တို့ လေ့လာသင်ယူခဲ့ရ။ မသိသေးသည်များလည်း ရှိနေ – H2Oupdatenews
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါကုသပေးနေရင်း နိုင်ငံတကာဆရာဝန်တို့ လေ့လာသင်ယူခဲ့ရ။ မသိသေးသည်များလည်း ရှိနေ
oungmarine11@outlook.com 29/06/2020	No Comments
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်သစ်တစ်မျိုး ပျံ့နှံ့ရာမှ မျက်မှောက်ကမ္ဘာကြီးတွင် Covid- 19 ကူးစက်ကပ်ရောဂါကျ ရောက်လျှက်ရှိသည်။ ၆-လတာကာလအတွင်း နိုင်ငံတကာအသီးသီးရှိ ဆရာဝန်နှင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ပုဂ္ဂိုလ်တို့အနေဖြင့် လူသေစေလောက်သော ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါကို ကုသပေးနေရင်း လေ့လာမှတ်သားခဲ့ကြရသည်။ သို့သော် မသိသေးသည်များလည်း ရှိနေသေးသည်ဟု Reuters ၏ ရေးသားချက်ကို Dhaka Tribune က ယနေ့ ပြန်လည်ဖော်ပြသည်။
* သွေးခဲခြင်းမြင့်တက်လျှက်ရှိသော လူနာများတွင် သွေးကျဲပစ္စည်းများက ကူညီနိုင်သည်။
* Proning မှောက်လျှက်ထားခြင်း – လူနာများကို ၎င်းတို့၏ ဝမ်းဗိုက်ပေါ်တွင် လဲလျောင်းရှိစေလျှက် မှောက်လျှက်ထားခြင်းဖြင့် အဆုတ်၌ ကျရောက်လျှက်ရှိသည့် ဖိအားများကို လျော့စေနိုင်သည်။ လိုအပ်လျှင် အသက်ရှူအကူစက် ပေးနိုင်သည်။
* ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်သည် အဆုတ်နှင့် အသက်ရှုလမ်းကြောင်းအပြင် နှလုံး၊ အသည်း၊ ကျောက်ကပ်နှင့် ဦးနှောက်အပါအဝင် အခြားကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများကို တိုက်ခိုက်နိုင်သည်။
* ယခုအချိန်ထိ ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရန် အလားအလာအကောင်းဆုံး ကုသဆေးမှာ remdesivir ( ရမ်ဒက်ဆီဗာ- ရမ်ဒီဆီဗီယာ ) ဖြစ်သည်။ dexamethasone ဒက်ဆာမီသာဇုန်းသည် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဝေဒနာရှင်များ၏ ခန္ဓာကိုယ်ရောင်ရမ်းမှုကို ကုသရန် စတီးရွိုက်ဆေးဖြစ်သည်။ ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံခဲ့ရဖူးပြီး ရောဂါပြီးစံနစ်ရရှိနေသည့် လူနာများက လှူဒါန်းသော ပလပ်စမာ သွေးရည်ဖြင့်လည်း ကုသပေးနိုင်သည်။
* ဆေးရုံများအပေါ် ဖိစီးမှုများအား လျော့ပါးသက်သာစေမည့် အကူအညီများကို အလျင်အမြန် အဖြေရှာခြင်း၊ ကျယ်ပြန့်စွာ စမ်းသပ်ခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့သည်။
* ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိ ကျန်းမာရေးပညာရှင်တို့အကြား အတိမ်းအစောင်းမခံသော သတင်းအချက်အလက်များကို မျှဝေနိုင်ခဲ့သည်။
* ကာကွယ်ခြင်းသည် အလွန်အရေးကြီးသည်။ အများလူထုနှင့် ထိတွေ့ရာတွင် ကောင်းမွန်သော တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရေး၊ မျက်နှာဖုံးဝတ်ဆင်ခြင်းနှင့် လူချင်းနီးကပ်မှု ဝေးကွာစေရန် လိုအပ်သည်။
သို့သော် မသိသေးသည်တို့အနက် အကြီးမားဆုံးအချို့မှာ:
* မည်သည့်လူနာအတွက် မည်သည့်ကုထုံးမှာ အထိရောက်ဆုံးဖြစ်သည်ကို အတိအကျ မသိသေးချေ။
* အချို့သောကုသမှုများတွင် အထူးသဖြင့် ရမ်ဒက်ဆီဗာ- ရမ်ဒီဆီဗီယာကို ပေးပြီးနောက် မည်မျှလျှင်လျှင် မြန်မြန်ရလာဒ်ထွက်ပေါ်မည်နည်း၊
* ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်စွဲ လူနာများကို ပြန်လည်ထူထောင်ရန် မည်မျှကြာမည်နည်း။
* ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရပြီးနောက် ရေရှည်အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုလည်း မသိရှိကြသေးဟု ဆို၏။
(( နိုင်ငံတကာတွင် ကူးစက်ကပ်ရောဂါကျရောက်နေလင့်ကစား Lock down တားဆီးပိတ်ဆို့ခြင်းများကို ဖြေလျှော့ပေးနေရပြီး၊ လေကြောင်းနှင့် ခရီးသွားလာခြင်းများကိုလည်း ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပေးရန် ချိန်ဆလျှက်ရှိကြပါသည်။ အဆိုပါကန့်သတ်ချက်များကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် နက်ရှိုင်းသော စီးပွားရေး-လူမှုရေး ဒါဏ်ရာဒါဏ်ချက်များကို မခံနိုင်တော့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။
ထိုသို့ ဖြေလျှော့- ဖွင့်လှစ်ပေးသည်နှင့် ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူအရေအတွက်မှာလည်း တိုးမြင့်လာသည်ကို တွေ့ရသည်။ ကူးစက်ခံရသူ – သေဆုံးသူများ ရှိနေသည့်တိုင် ကမ္ဘာ့လူသားအားလုံးသည် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါနှင့် နေသားတကျဖြစ်ရန်သာ ကြိုးစားရပါမည်
ကျွန်တော့အထင်အရ ထိရောက်သော ကာကွယ်ဆေး- ကုသဆေးပေါ်ပေါက်လာမည့် ၂-နှစ် ၃-နှစ်ခန့်အတွင်း သည်လိုပဲ အစုအပုံလိုက် ကူးစက်ခံရသူ- သေဆုံးသူများ ရှိနေမည်ဖြစ်ရာ မကောင်းသူထိပ်- ကောင်းသူထိပ်ဟု ဆိုရပါတော့မည်။ ။ သတင်းဘာသာပြန်သူ ))
((( Dhaka Tribune., June 29, 2020.” What doctors have learned about fighting Covid-19.” ကို #HtayOung, #OungMarine ဆီလျော်အောင် ကောက်နှုတ်ဘာသာပြန်ဆိုသည်။ )))
What doctors have learned about fighting Covid-19 Reuters Published at 09:29 am June 29th, 2020. The most promising treatments so far seem to be the anti-viral remdesivir; dexamethasone,asteroid to treat the body’s inflammatory response to Covid-19; and plasma donated by patients who have antibodies to the disease In the six months since an entirely new coronavirus began spreading around the world, doctors and hospitals have learnedalot about how to treat patients with Covid-19, the potentially deadly disease caused by the virus. What doctors have learned about fighting Covid-19: * Patients are at increased risk of blood clots, and blood thinning agents can help. * “Proning” – putting patients on their stomachs to relieve pressure on the lungs – can stave off the need for mechanical ventilation. * Besides the respiratory system and lungs, the coronavirus can attack many other organs, including the heart, liver, kidneys, and brain. * The most promising treatments so far seem to be the anti-viral remdesivir; dexamethasone,asteroid to treat the body’s inflammatory response to Covid-19; and plasma donated by patients who have antibodies to the disease. * More widespread testing and quicker results helps relieve pressure on hospitals. * Information-sharing among health professionals worldwide is crucial. * Prevention is critical. Doctors are relying on the public to do their part with good hygiene, masks and social distancing. Some of the biggest unknowns: * Exactly which treatments will work for which patients. * How quickly some treatments will gain widespread distribution, especially remdesivir. * How long it will take for Covid-19 patients to recover. * The long-term effects of the infection. “If the best lesson we’ve learned is to turn patients onto their stomachs instead of their backs,” said Valory Wangler, chief medical officer at Rehoboth McKinley Christian Health Care Services, in Gallup, New Mexico, “it means we’re far fromamiracle cure.”
Previous Previous post: ထူးထွေတည့် အံ့ရာ သြော် … အချီကြီး အီတွန့်ပွမ် ရခြင်း
Next Next post: နယ်စပ်ဒေသ၌ တရုတ်က ပြဿနာဖန်တီးနေကြောင်း အိန္ဒိယနှင့် အာဆီယံနိုင်ငံများက စွပ်စွဲပြီးနောက် မြန်မာ၌လည်း အလားတူ စွပ်စွဲချက် ထွက်ပေါ်